धानको समर्थन मूल्य कति ? - Baikalpikkhabar
धानको समर्थन मूल्य कति ?
झापा, साउन २७ / सरकारले यो वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २९ सय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले धानको समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि मध्यम धानका लागि प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय १ रुपैयाँ ८३ पैसा तथा मोटा धानको २ हजार ७ सय ९१ रुपैयाँ ९२ पैसा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टलमा १७ रुपैयाँ बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि यो मूल्य कार्यान्वयमा आउनेछ ।
गत वर्ष मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको थियोे । गत वर्ष धानबाली लगाउनु अघि नै समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । यो वर्ष धान रोपिसकेपछि मूल्य प्रस्ताव गरिएको छ ।
बुधबार, २७ साउन, २०७८, बिहानको ०९:३४ बजे